အဘယ်အရာကိုသဘာဝစမ်းသပ်အင်တာဗျူးအတွက်ဖြစ်ပျက်? | USAHello | USAHello
Nature သငျသညျအမေရိက၏အမရေိကနျပွညျထောငျစု၏နိုင်ငံသားစေသည်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်. သဘာဝစမ်းသပ်, သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ကိုစမ်းသပ်, အင်တာဗျူးဖြစ်ပါသည်. သင်တစ်ဦးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများအရာရှိများကမေးခွန်းထုတ်လိမ့်မည်. အဆိုပါအင်တာဗျူးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာအတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. သဘာဝစမ်းသပ်မှုအကြောင်းကိုနှင့်မည်သို့အင်တာဗျူးများအတွက်ပြင်ဆင်ထားရန်အထဲက Find.
သဘာဝစမ်းသပ်မှုအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာဖို့လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အများအပြားခြေလှမ်းများတစ်ခုဖြစ်သည်. အချိန်ကိုအားဖြင့်သင်သည်သင်၏အင်တာဗျူးတက်ရောက်ရန်, သငျသညျရပါလိမ့်မယ်:
သငျသညျဖြစ်ကြောင်း check လုပ်ထား လျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီ နိုင်ငံသားများအတွက်
သင်၏လျှောက်လွှာပုံစံကိုပို့ (အဆိုပါ N-400) သို့ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လျှောက်ထား
တစ်ဦး biometric ချိန်းနှင့်နောက်ခံစစ်ဆေးမှုများပြီးစီး
အားလုံးသင့်ရဲ့စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံသောအခါ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံသားဖြစ်မှုနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးန်ဆောင်မှုများ (USCIS) တစ်လှေတျမညျ ချိန်းအသိပေးစာ. အဆိုပါအကြောင်းကြားစာသင်သည်သင်၏အင်တာဗျူး၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်ကိုပြောပြလိမ့်မယ်.
အဆိုပါအင်တာဗျူးတစ်ခုနိုင်ငံသားဖြစ်လာဖို့နောက်ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျသင်တို့ဇာတိစမ်းသပ်ရှောက်သွားပြီးတာနဲ့, သင်တစ်ဦးအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်.
သေချာသည်သင်၏အင်္ဂလိပ်စာဖတ်ရာတွင်ပြင်ဆင်ထားနည်းလမ်းဖြစ်ခြင်း, စကားပြောနဲ့စာရေးကျွမ်းကျင်မှုအလုံအလောက်ကောင်းပါတယ်. ဒါဟာအစနိုင်ငံသားနှင့်ဆိုင်သည်များစမ်းသပ်မှုများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်. သင်တို့ရှိသမျှသည်နားလည်သေချာအောင်လုပ်ပါ မေးခွန်းများကိုသင်သည်သင်၏အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းဟုမေးပါလိမ့်မည်.
သငျသညျအဆင်သင့်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်လုပ်နိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခမဲ့အွန်လိုင်းသင်တန်းများတက်သည်လက်မှတ်ထိုး သဘာဝစမ်းသပ်ဘို့သင့်ပြင်ဆင်ထားရန်.
သင့်ရဲ့အမြဲတမ်းဌာနေကိုယ်စားလှယ်ကတ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ဥပဒေ Card ကို (အစိမ်းရောင်ကဒ်)
သင့်ကိုယ်ပိုင်ရည်ညွှန်းအဘို့သင့် N-400 လျှောက်လွှာပုံစံတစ်မိတ္တူ
တစ်ဦးက အဆိုပါစာရင်း 100 မေးခွန်းများကို အရာရှိကကောက်လိမ့်မည် 10 ကနေမေးခှနျးတှေ (အဖြေအချို့ကိုကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့, ထိုကဲ့သို့သောသမ္မတ၏အမည်အဖြစ်, ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်. ဤစာရင်းတွင်ရှိရာလက်ရှိအမည်များကိုရှာတွေ့မှငါပွောမညျ).
သင်သည်အခြားစာရွက်စာတမ်းများယူဆောင်လာရန်လိုအပ်မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ချိန်းဆိုမှုအသိပေးစာသငျသညျပွောကွလိမျ့မညျ, ထိုကဲ့သို့သောလက်ထပ်ထိမ်းမြားသို့မဟုတ်ကွာရှင်းလက်မှတ်များအဖြစ်, အခွန်စာရွက်စာတမ်းများ, သင့်အိမ်ထောင်ဖက်သို့မဟုတ်ကလေးများနှင့်အတူလုပ်ဖို့သို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းများ.
သင်သည်သင်၏အင်တာဗျူးကာလအတွင်းအဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုသိလျှင်, သငျသညျပွငျဆငျနိုငျ. တဖန်သင်တို့ကိုပြင်ဆင်လျှင်, သငျသညျအာရုံကြောခံစားရရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်! ဤသူသည်သင်တို့ကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ:
သင့်ရဲ့ချိန်းဆိုမှုအတှကျအစောပိုင်းနာရီဝက်ရောက်ရှိမည်ကောင်းသောကြောင့်. သင်တစ်ဦးကလုံခြုံရေးစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှတဆင့်သွားပါနှင့်လက်ျာရုံးကိုရှာဖွေရန်အချိန်နှင့်စောင့်ဆိုင်းဧရိယာလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. လည်း, သငျသညျအနညျးငယျအစောပိုင်းရှိပါတယ်လျှင်, သငျသညျလျော့နည်း Rush နှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောခံစားရပါလိမ့်မယ်.
သင်ကသင့်ရဲ့အလှည့်သည်အထိခဏစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိစေခြင်းငှါ. သင်သည်သင်၏ပုံစံသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုမေးခွန်းများကိုကျော်ကြည့်ဖို့အချိန်ကိုသုံးနိုငျ. အဆိုပါ USCIS အရာရှိထွက် လာ. ထိုကြောင့်သင့်ရဲ့အလှည့်အခါသင်တို့၏နာမကိုပဌနာပါလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးပုဂ္ဂလိကရုံးကိုသွားပါလိမ့်မယ်. သငျသညျထိုင်ခင်မှာ, အရာရှိကသင့်ရဲ့လက်ျာဘက်၌ပြုစုပျိုးထောင်ရန်သင့်အားမေးပါနှင့်အမှန်တရားပြောပြရန်ကတိပေးလိမ့်မယ်.
အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်း, အရာရှိကသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုစစ်မှန်တဲ့နှင့်မှန်ကန်သေချာအောင်နေသည်. He or she will ask lots of questions about the information on your application (Form ကို N-400). တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, သူသို့မဟုတ်သူသည်သင်၏အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်နေသည်.
တချို့ကအဟောင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကျန်းမာရေးပြဿနာများသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းတချို့လူတွေက may တစ်ခုချွင်းချက်အဘို့အအရည်အချင်းပြည့်မီ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလိုအပ်ချက်မှ.
အဆိုပါအရာရှိကသင့်ရဲ့နောက်ခံအကြောင်းကိုမေးခွန်းများမေးပါလိမ့်မယ်. သူသို့မဟုတ်သူမလျှောက်လွှာပုံစံပေါ်တွင်မဟုတ်ကြကြောင်းမေးခွန်းများမေးစေခြင်းငှါ. အဆိုပါအဘို့ပြင်ဆင်ရမည် မေးခွန်းများကိုမေးစေခြင်းငှါ.
မေးခွန်းများကိုပြီးဆုံးသောအခါ, သငျသညျအနညျးငယျစာရွက်စာတမ်းများလက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်, သင်၏လျှောက်လွှာနှင့်သင့်ဓာတ်ပုံတွေအပါအဝင်.
လူအများစုဟာလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားနှင့်ဆိုင်သည်များအပေါ်တစ်ဦးစမ်းသပ်ယူရပါလိမ့်မယ်, သမိုင်းနှင့်အစိုးရ. အင်တာဗျူး၏ဤအပိုငျးတူညီတဲ့အရာရှိနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်, သို့မဟုတ်ပါကတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားလူတစ်ဦးနှင့်အတူဖြစ်နိုင်သည်. ဒါဟာပထမဦးဆုံးသို့မဟုတ်အဆုံးမှာလာနိုင်ခြင်း.
ဒီစာမေးပွဲဖြေဆိုစဉ်ကာလအတွင်း, သငျသညျဖြေဆိုရပါမည်6ထဲက 10 မှန်ကန်စွာအမေရိကန်နိုင်ငံသားနှင့်ဆိုင်သည်များနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းများကို. အဆိုပါမေးခွန်းများနှင့်အဖြေကိုပွောဆိုနကွေ. သင့်ရဲ့အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ဖို့စုံစမ်းတိုတောင်းတဲ့စာဖြင့်ရေးသားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိလိမ့်မည်. အဆိုပါအရာရှိကိုချရေးဖို့သင်တစ်ဦးဝါကျကိုပြောပါလိမ့်မယ်. သင်တို့သည်လည်းဝါကျဖတ်ရှုဖို့တောင်းပါလိမ့်မယ်. တစျဖနျ, သင်တို့ရှိသမျှသည်အဘို့အပွငျဆငျနိုငျ မေးခွန်းများကိုသင်သည်သင်၏အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းဟုမေးပါလိမ့်မည်.
တစ်ဦးကလူအနည်းငယ်ကဒီစမ်းသပ်မှုယူရန်မလိုပါ. ရှိပါတယ် အချို့သောခြွင်းချက် ကနျြးမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသို့မဟုတ်မသန်စွမ်းအဟောင်းတွေကလူသို့မဟုတ်လူတို့အဘို့.
သင်လုပ်နိုင်သည် ယင်းကို download လုပ်ပါ Nature ဖို့ကိုလမ်းညွှန် အဆိုပါဗီဒီယိုထဲမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့. သငျသညျထိုလုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်သန်းသွားအဖြစ်ဒီလမ်းညွှန်ကိုအသုံးပြုပါ. သငျသညျရှိသညျမေးခွန်းများကိုအများစုမှာလမ်းညွှန်ထဲမှာပြန်ဖြေပါလိမ့်မည်.
• From the time the officer greets you, သူသို့မဟုတ်သူသည်သင်၏အင်္ဂလိပ်ကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်နေသည်. ဂရုတစိုက်နှင့်ရှင်းလင်းစွာပြောဆိုရန်သေချာပါစေ.
• Always tell the truth and do not hold back any information. အဆိုပါအရာရှိအခြားအရင်းအမြစ်မှသင့်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရှိစေခြင်းငှါ. သငျသညျအဖြေမသိသောသို့မဟုတ်မအောက်မေ့နိုင်လျှင်, ဒါကြောင့်ပြောအဆင်ပြေထိုသို့. သငျသညျအရာတစ်ခုခုနားမလည်ကြပါလျှင်၎င်းသည်အရာရှိပြောပြရန်လည်းအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်.
• If you do not speak English, သင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာအင်္ဂလိပ်အတန်းကိုသွားဖို့အချိန်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစား. အတော်များများကဒေသခံကောလိပ်များ, စာကြည့်တိုက်နှင့်ရပ်ရွာစင်တာများအခမဲ့အတန်းကိုဆက်ကပ်. သင်၌ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည် FindHello အတန်းကိုရှာဖွေ. သို့မဟုတ်သင်လုပ်နိုင် အွန်လိုင်းအတန်းကဒီမှာတွေ့ပါ.
• TakeaUS citizenship course to help you pass your test. သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာလူတန်းစားသှားဖို့လိုပါလျှင်, သင်ဒီမှာနေရာရှာဖွေနိုင်ပါတယ် - ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်းအမြစ်အပိုင်းများတွင်ဖော်ပြထားသောအတန်းများစွာကိုအခမဲ့များမှာ. သို့မဟုတ်သင်တို့သည်ငါတို့၏အခမဲ့အွန်လိုင်းနိုင်ငံသားလူတန်းစားယူနိုင်ပါသည်. သင်လုပ်နိုင်သည် ဤနေရာတွင် sign up ကို သငျတို့သအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီအခါတိုင်းစတင်!
အရည်အချင်းပြည့်မီ Be, ပြင်ဆင်, နှင့်သစ္စာဝါဒီဖြစ်.